Somalia | Warbixinta Xaaladda
Warbixinta Xaaladda La cusbooneysiiyey: 10 déc. 2020 (Keyda)
Akhri warbixinta xaaladda enso
Warbixino kooban (9 bilood oo la soo dhaafay)
Duufaanta Gati waxay sababtay in xaaladda bini’aadamnimo ee ka jirtay Puntland sii xumaato. Duufaanta waxay saameysay ku dhowaad 200 kun oo qof, oo 42, kun kamid ah eey barakaceen.
In kasta oo ay kordhayaan kiisaska bini’aadamnimo, hadanna waxaa caqabad ka taagantahay helitaanka gaadiidka ee gobolada dalka qaarkood.
Hay’ada beeraha iyo xoolaha ee FAO ayaa ka digtay faafitaanka ayaxa ee qeebo kamid ah koonfurta Soomaaliya.
Deeqaha kooxaha kale duwan ee bini’aadamnimada ayaa wali ah mid aan isku dheelitirneen; in ka badan kale bar kooxaha ayaa helay in ka yar boqolkiiba 35 lacagihii loo baahnaa.
kaalmo lacageed oo loogu talagalay in wax loga badalo nolosha dadka barakacayaasha ayaa la gaarsiiyay kaamamka ku yaalo Koonfurta Gaalkacyo.
OCHA Somalia November Humanitarian Bulletin Photo: OCHA
La dejiyay: 27 sept. 2021
Nambarada muhiimka ah
# dadka cunto u baahan
dadka ku jira xaaladaha degdegga (3 iyo 4)
# dadka ku jira xaalad adag
# caruurta la qiyaasayo nafaqo darro heyso
# Barkaca gudaha
Erich Opolot Ogoso
Warbixin dheer (9 bilood oo la soo dhaafay)
Duufaanta Gati ayaa sababtay in xaaladda bini’aadamnimo ee Puntland kasii darto
Xaaladda bini’aadamnimo ee Soomaaliya ayaa kasii dartay kadib duufaanta Gati taasoo ku dhufatay gobolka Bari ee Puntland 22-da bishii Nofeembar. Roobab dhax dhaxaad iyo kuwa xoogan ayaa sababay duufaanta taaso ka kacday deegaanada Puntland waxeen saameesay ilaa 200,000 qof oo eey kamid yihiin 42,000 oo kasoo barakacay degmada Isku shuban. Duufaanta Gati ayaa sababtay dhimashada ilaa sagaal qof iyo burbur soo gaaray agabyada kaluumeesatada, sidoo kale waxaa duufaanta iyo roobab dishay xoolo badan waxaan gabi ahaan baaba’ay cooska iyo beeraha. Duufaanta ayaa timid iyadoo hore u jirtay saddax khatar oo kale ah caabuqa COVID-19, Ayax iyo daadad, taaso kor u qaaday dhibta ka jirta cunno la,aanta ee dalka.
Sida laga so xigtay FAO-SWALIM, roobab aan la fileen ayaa ka da’ay Somaliland taaso hore ugu jirtay roobab la,aan waqti dheer laga soo bilaabo bishii Sebteember. Sikasto ha ahaatee roobabka ayaa ah kuwa aan ku filneen dadka ku nool deeganada Somaliland.
Saadaasha ayaa sheegtay in roobab dhax dhaxaad eey ka jiran qeeba kamid ah Koonfurta Soomaaliya. Hay’ada saadalinta cimilada ee IGAD ayaa sheegtay in laga diiwangaliyay qeeb kamid Soomaaliya roob la,aan taaso eey ka digeen in eey khatar ku noqoto habnololeedka dadka. Xiliga Dayrta ee bilaha (Oktoobar ilaa Diseembar) ayaa qalqal galiyay dalka, iyadoo eey kasoo daahday roobabka qeebo badan oo kamid ah Soomaaliya. Sikasto ha ahaatee roobabka ayaa sababay daadad taaso natiijadiisa eey noqotay barakac, dhimasho, burbur kaabayaasha oo eey kamid yihiin wadooyinka, guryaha iyo beeraha sida laga soo xigtay hay’adaha gargaarka. Ugu yaraan 73,000 qof ayuu saameeyay roobabka Dayrta gaar ahaan gobolka Banadir,Jubaland, Hirshabelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ilaa 23-da bishii Oktoobar.dadka uu saameeyay ayaa waxaa kamid 53,000 barakacayaal iyo dadka deegaanka ee ku nool Baydhabo koonfur Galbeed kuwaasi oo markii hore noloshood eey liidatay.Daadadka Dayrta ayaa daba socday roobabkii Xagaa ee (Juun ilaa Sebtember) fatahaadaha wabiga iyo daadka ayaa saameeyay in ka badan 545,000 qof oo ku nool Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubaland.
Waxaa kordhay waxyeelada Ayax ee koonfurta Soomaaliya
Waxyeelada ayax ayaa wali ka socota koonfurta Soomaaliya. Gobolka Banadir ayaa laga soo sheegay waxyeelada ayax gaar ahaan Deyniille iyo Kaxda, taaso beeraleeda deeganadaasi eey sheegeyn in beerahood ee ka baabiyeen ayax. Xaaladda Jubaland ayaa ka sii dartay waxaan soo sheegayaa in ka badan 20 xaafadood ee Dhoobley iyo Afmadow uu waxyeelo u geestay ayax. Koonfur Galbeed ayaa laga soo tabiya ayax gaar ahaan Shabelle hoose iyo gobolka Bay. Qiyaastii 200 hiktar oo beeraha ayaa burbur soo gaarahy degmooyinka Marka iyo Afgooye. Wali Puntland ayaa waxaa ka jiro ayax waxaa lagu arkay dhinacyada qudaarta taaso eey ku tiirsanyihiin dadka deegankaasi. Hirshabelle ayaa lagu soo waramayaa in lagu arkay ayax farabadan gaar ahaan gobolada Hiiraan iyo Shabelle dhexe.
Duufaanta Gati ayaa saameyn weyn ku leh ayax jooga Somaliland iyadoo uu si deg deg u faafayo. sida laga soo xigtay FAO roobabka ayaa sababay duufaan iyo dabeelo taaso sababtay in la degaaalanka ayax adkaado iyo isticmaalka wadooyinka. Gobolka Sanaag waxaa la sheegay in ayax u wareegay Sool iyo Togdheer. Natiijada ayaa ah in dhulbeereedka aad u baaxad ween iyo daaq eey waxyeelo soo gaartay taaso sii xumeesay beeraha iyo habnooleed xoolaha.
Ka-falcelinta ayaxa iyadoo laga holgalayo hawada iyo dhulka ayaa sarra looqaaday halka agabyada la adeegsanaayo uu yahay diyaarada, baabuur iyo suntan cayayaanka waxaan loo tababaray shaqaalo qeeba badan oo Soomaaliya kamid ah. Laga soo bilaabay sannadkan FAO ayaa buufisay in kabadan 110,000 hiktar oo beero waxaa la badbaadiyay 193,999 mitir oo dallagayo iyo wax soo saar gaaray ilaa 90,000 qoysas xoola dhaqatada. Ka-falcelinta ayax ee beeraha iyo qoysas xoola dhaqatada ayaa soo gaaray lacag cadaan xiliyada Dayrta iyo Gu’a qoysaska wax lasoo gaarsiiyay ayaa gaarayo 24,300 qoys xilka Gu’a halka xiliga Dayrta eey lacag cadaan soo gaareen 16,000 qoys. Xoolo dhaqatada ayaa saameen ku reebay ayax, kaaso baabiyay 3,600 mitir oo tan eey quudan jireen xoolaha waxaa qoyskasto soo gaaray 30,000 qoys, halka 2,450 qoys la diiwaangaliyay lacag cadaan. Waxaa intaasi dheer FAO ayaa soo gaaray US$50.4 milyan si loo taageero qorshaha la dagaalanka ayax oo eey hogaamineeso dowladda federlka ee Soomaaliya waxaa guud ahaan loo bahanyahay 57 milyan. waxaa intaasi dheer qarashaadka loogu talagalay in lagu buufinayo ayax, gaadiidka qarashad lagu holgalayo taaso socon doonta ilaa Juun ee 2021.
Warbixin dheer URL
Warbixin dheer (1 sana ka hor)
Tirada dadka ka barakacay daadadka ilaa bisha luuliyo2020. Xigasho: PRMN
Malgalinta bulshada u nugul abaaraha
Barnamijka hormarinta iyo maalgalinta ee Swiss ayaa bartilmaameedkiisa yahay ilaa 22,000 qof si kor lagu qaado bulshada eey dhibaatoyinka eey saameeyeen waxaan laga furay magaalada baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed. Ujeeda barnamijkan ayaa ah in lagu yareeyo waxyeelada abaarta eey geesatay, sidoo kale wax soo saarka daaqa iyo xoolaha, wax soo saarka dhulka, biyaha iyo wax soo saar bulshada si looga soo kabto dhibaatoyinka abaarta. Waxaa intaasi dheer barnamijkan ayaa lagu talagalay in lagu hagaajiyo dhamaan qoysaska islamarka la hirgaliyo mareenta musiiboyinka si loo hagaajiyo dhaqaalaha bulshada iyo dadka liito. Barnamijkan ayaa waxaa hirgaliyay hay’adaha kale ah Somali Resilience programme (SomRep) Consortium. Xubnaha SomReP oo ey kamid yihiin Action Against Hunger (AAH), Adventist Development iyo Relief Agency (ADRA), CARE Soomaaliya, Cooperazione Internazionale (COOPI), Danish Refugee Council (DRC), Oxfam Somalia iyo World Vision Soomaaliya Wasiirka bini’aadanimada iyo mareenta musiiboyinka cabdinasir Carush ayaa ka hadlay furitaanka barnamijkan ee magaalada Baydhabo wax uuna sheegay in loo bahanyahay in la halo barnaamijyo badan oo dadka deeganka wax lagu qabanayo si loola dagaalamo abaarta taaso caqabad ween ku ah dadka deeganka.
Hay’adaha fulinaayo barnaamijkan waxaa awood siinayaan dadka wax soo saaro islamarkan eey ku adkaadan caqabadaha xirfadlayaasha xadidan iyo wax soo saarka beeraha iyo wax soo saar ganacsi aan cadaalad ku dhisneen, awood beeraha oo xadidan, qiimaha wax kale iibsiga iyo caqabadaha kaabayaasha sida waraabka iyo biyaha oo xadidan . si kor loogu qaado wax soo saarka habnololeedyada jira, barnamijku wuxuu kordhin doonaa helitaanka agabka loo adeegsanayo abaaraha, adeegyada caafimaadkaa xoolaha iyo kor uqaadista quudinta xoolaha iyo wax soo saarka beeraha.Barnaamijka waxaa la filayaa inuu ka soo xaroodo dakhliga badan, iyo inuu u diyaariyo haweenka iyo dhalinyarada awoodo ay ku qaataan istiraatiijiyado cusub iyaga oo loo qalabeenayo xirfado, waxaa intaasi dheer in la sameeyo istiraatiijiyad loo maro kooxaha keydka, tababarka xirfadaha, ganacsiga iyo tababarka xirfadaha nolosha.
Soomaaliya waa mid ka mid dalalka eey ka jiraan dhibatooyinka bini’aadanimada ee murugsan. Dhibaatoyinka amni darada ee mudada dheer jirtay iyo dhibaatooyinka bini’aadanimao ee daba dheeraaday ayaa caqabad ku noqday dadaalada hormarineed taasoo ka dhigeysa in dadku aad ugu nugul yihiin dhibaatoyinka, gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha, dadka waayeelka ah, dadka cuuryaamada iyo qoysaska. Isku dhacyada colaad iyo aafooyinka cimilada ayaa si isdaba joog ah u barakaciyay boqolaal kun oo dad ah sanadkii la soo dhaafay.
Jawaabaha xaaladaha deg deg ah (1 sana ka hor)
Xalima waxey qaadaneysaa deeq raashiin ah Sawirka: RAHO NGO
Shaqo la,aanta iyo u halganka sidii loo dabooli lahaa baahiyaha xiligii uu socda cudurka safmarka COVID-19- Sheekada Xaliimo
Xaliimo Xasan Axmed waa 43 jir, waan madax qoyskeed oo ka kooban sideed caruur oo ku nool magaalada Muqdisho. Beeraha ayaa ahaa isha kaliya ee ay ka hesho dakhli 30 kii sano ee la soo dhaafay ka hor inta aysan ka soo qaxin gobolka Shabeelle hoose sanadkii 2018 sababo la xiriiro abaaro soo noqnoqday oo eey ku barakaceen kumanaan qoys. Iyadoo ay weheliso sideed caruur ah waxaay ku nooshay xarunta barakcayaasha ee Ceelbarde ee ku yaalo degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Saddexdii sano ee la soo dhaafay, Xaliimo waxeey ku shaqeesaneesay xoogsato waxaan malintii ku shaqeen jirtay ilaa 3 doolar si ay ugu taageerto nolosha qoyskeeda. Tani waxaay istaagtay bishii Maarso markii kiiskii ugu horey ee COVID-19 looga dhawaaqay magaalada Muqdisho. Meel eey aado ma jirto balse waxaa maciin biday in caruurta u dirto in eey soo dawarsadaan.
Xayiraadaha dhaqdhaqaaq eey soo rogeen dowlada federalka ayaa xaaladood ka sii dartay. “waxaan joogay xarunta barakcayaasha bilihii ugu horey ee cudurka safmarka maxaa yeelay ma tagi karo magaalada si aan dharka ugu dhaqo qoysaska ku nool magaalada. Waxaan ka baqaayay in aan qaado cudurka. Waana sababta goobaha barakcayaasha loo arkayo in eey tahay meelaha ugu qatarta badan cudurka COVID-19.” Intaasi ayaa raacisay.
Dhibaatada qoysaska, oo ay ku jirto qoyska Xaliima, waxaa soo sheegay ururka RAHO sidoo kale Xaliimo ayaa waxee kamid noqotay ilaa 60 qoys oo loo qeebiyay raashin. Qoyskeed ayaa waxaa soo gaaray xirmooyin raashin oo ka kooban 25 kiilo oo bariis ah,25 kiilo oo bur ah, 10 kiilo oo baasto ah, 3 liitar oo saliid ah iyo 2.5 kiilo oo caano ah.
Jawaabaha xaaladaha deg deg ah URL
Dowladda federalka ee Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay ayaa ku baaqay in la ilaaliyo shaqaalaha gargaarka iyadoo ku beegneed malinta bini’aadanimada aduunka
Soomaaliya ayaa laga xusay malinta bini’aadanimada ee aduunka ee 19 Agoosto. Xuska ayaan loo qabanin sida caadi ah sabab la xiriir COVID-19 iyo in eey mamnuuc tahay in bulshda eey isku imaadan. Waxaan la sameeyay filimo, sawiro iyo sheekooyin taaso laku baahiyay internetka. Waxaa jiray araktiyo lagu dhiir galinayay shaqaalaha bini’aadanimada waxaa kamid ahaa #GeesiyaashaNoloshaDhabta ah waxaa la gaarsiiyay dhamaan hay’adaha Qaramada Midoobay, ururada iyo dowlada federalka . Qadarin iyo aqoonsi ayaa loo sameeyay si eey u sii wadaan gargaarka bini’adanimada ee aan kale joogsi laheen.
Qaramada Midoobay iyo dowladda federalka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la ilaaliyo shaqaalaha bini’aadanimada kuwasi oo bixinayaan adeeg dadka unug dhibaada ee dalka soomaaliya. Warsaxafadeed eey si wadajir u soo saran dowladda fedralka iyo Qaramada midoobay ayaa walaac waxaa ka muujiyeen amnidarada iyo kabayaasha dalka oo liito taaso dhibaato ku ah gaarsiinta dadka u baahan gargaarka. Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa mid kamid dalalka ugu qatarta badan.
Xuska sanandkan ayaa ku soo aaday xil Soomaaliya eey la daalo dhaceeso sadax qatar oo kale ah COVID-19, Daadadka iyo Anyax taaso sii xumeeneso xalaadad bini’aadinimad ee ka jiro Soomaaliya.
Sanadkaso, malinta bini’aadanimad aduunka ayaa diirada lagu saaraa in eey isku imaadaan shaqaalaha bini’aadanimada si looga doodo badbaada iyo dadka dhibaatad eey saameeysay , nabadglyada iyo amniga shaqaalaha gargaarka.
Barakacca iyo Badbaadada 2020
Ku dhawaad hal milyan oo qof oo barakacay sannadkan
Inta u dhaxeesay bilihii Janaayoi iyo Agoosto ee 2020, in ka badan 885,000 qof eey barakac sameeyeen kadib markii eey ka carareen daadadka iyo dagaalo. Ku dhawaad 70 boqolkiib aye ka badan yihiin tirada la diiwangaliyay sanadkii 2019. Sida laga soo xigtay UNHCR/NRC ayaa sheegtay in kabadan 627,872 qof eey barakac cusub eey sameeyeen daadadkii dhacay sanandkan 2020. Iska hor imaadayo iyo amni xumo ayaa waxaa guryahood ka cararay dad lagu qiyaaso 175,194 qof.
Guryo ka saarid qasab ah ama ogeeysiis la,aan ayaa wali laga soo warinayaa dalka waxaan dad lagu qiyaas 97,624 qof eey barakac sameeyeen inta u dhaxeesay bishii Janaweri iyo Agoosto ee sannadkan. 63,930 qof ayaa laga saaray magaalada Muqdisho kaliya. Tiradaan ayaa ka hooseeso qeebta hore ee sannadkan kadib markii hay’adaha ee qaadeen talaabo lagu joojinayo. Guud ahaan 20,831 qof ayaa laga hortagay in laga saaaro halka eey ku noolayeen inta u dhaxeesay bishii Fabarayo ilaa Meeyo.
Hay’adaha gargaarka ayaa wali wadaan taageerida dadka barakcayaasha, badbaadintood iyo xal u halidood. Bishii Luuliyo, kooxda guryaha ayaa ka caawiyeen dad gaarayo 1,800 qof agabyada guryaha oo eey ka midka yihiin bacaha guryaha, busto,jiirkaanada biyaha, firaashka sariirta iyo agabyada jikada. Sidoo kale kaalmada ayaa waxaa daba socdo ololaha lagu yareenayo COVID-19 iyo sameenta uu ku leeyahay dadka barakcayaasha iyo joojinta in guryaha laga saaro dadka barakcayaasha waxaan arintaasi qeeb ka ah dowladda federalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
Soomaaliya ayaa waxaa hooy u tahay 2.6 milyna qof oo barakacayaal kuwaasi oo ku nool 2,300 xarumo barakacayaasha; ee ku yaalo magaalada. In ka badan 80 boqolkiib xarunta barakcayaasha ayaa ah goobo si gaar loo leeyahay halka 74 boqolkiib eey ku nool yihiin magaalada. Waxaa intaasi dheer 3,000 qaxooti ah eey hada ku noolyihiin Soomaaliya waxaa ka imaadeen dalalka Yemen iyo Ethiopia.